ဇာတိအလှမျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
July 1, 1999 November 25, 2021 kyaw zaw oo
Sittwe View Point Park seen from View Point Tower at the Date of 2017 March 26.
photo by Arezarnihttps://en.wikipedia.org/wiki/Point,_Sittwe#/media/File:Sittwe_View_Point_Park_in_2017_March_26.jpg
[ Zawgyi version here ] [Unicode version below ]
ကျွန်တော်က တောသား။ ကမ်းရိုးတန်းသား။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ဇာတိမြို့မှ ရန်ကုန်သို့ သွားရန်လာရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်။ ကျွန်တော့် ဦးလေးတွေ တက္ကသိုလ်သွားတက်လျှင် လေယာဉ်ဖြင့်သာ သွားကြပြန်ကြသည်။ သူတို့လေဆိပ်ကို ဆင်းလျှင် အဖေက ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားမြဲ။ လေယာဉ်သည် ပြေးလမ်းတွင် ပထမပြေးသည်။ ပြီးတော့ လေထဲသို့ တဖြည်းဖြည်း ကြွတက်ကာ အရှေ့တောင်အရပ်သို့ ပျံသန်းသွားသည်။ ကောင်းကင်ထဲတွင် လေယာဉ် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ကလေးဘ၀တုန်းက ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ရန်ကုန်ဆိုသည့်နေရာကား ကောင်းကင်တွင် ရှိသည်။ လေယာဉ်ဖြင့်သွားလျှင်ရောက်သည်။ ကောင်းကင်တွင်ရှိသည်မှန်လျှင် အမေတို့ ပြော သည့် နတ်ပြည်ဆိုတာ ရန်ကုန်ပဲဖြစ်မည်ဟုထင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ကြီးလျှင် ရန်ကုန် သွားမည်။ ဒါက ကလေးဘ၀အတွေး။ ဒါကို ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ပြုံးမိသည်။ သည်လိုနှင့် ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာသည်။ သို့သော် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ကြုံရသည့် ရန်ကုန်ကား ကျွန်တော့်အတွက် နတ်ပြည်မဟုတ်။ တစ်ရက်စံလိုက် ဆယ်ရက်ခံလိုက် စံစား လိုက် ခံစားလိုက်ဖြင့် မြို့ပြကို ဖက်တွယ်နေထိုင်မိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပင် ရှိရော့မည်။
စမ်းသပ်ခန်းထဲက ကြွက်ကလေးလို tread-mill ရဟတ်လှောင်အိမ်လေးထဲတွင် ရှေ့ကို ပြေးနေရင်း ပြေးနေရင်း ခရီးမတွင်မှန်းမသိ၊ အပတ်ရေပေါင်းမည်မျှ လည်သွားမှန်း လည်းမသိ၊ ဇာတိသိစိတ်အရ တုံ့ပြန်ရင်းသာ ရှေ့ကိုပြေးနေမိတော့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကျွန်တော်ဆိုးသွမ်းလို့ ကောင်းတုန်း မိုက်မဲခြင်းကို ဂုဏ်ယူလို့ကောင်းတုန်းက အမေ ကျွန်တော့်ကို ငိုယိုဆုံးမလျှင် “ဘ၀အမော” ဆိုတာ အမေ့စကားတွေထဲမှာ ပါလာတတ်သည်။ ဟိုတုန်းကတော့ အမေက မြန်မာစာဆရာမမို့လို့ ချဲ့ထွင်ပြောသည်ဟု ထင်မိသည်။ ဘ၀အမော ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ဘ၀မှာမောလာတော့မှ နားလည်မိသည်။
တွေးကြည့်လျှင် အရာရာတိုင်းမှာ လွမ်းစရာချည်းပင်။ အရာရာတိုင်းသည် ဇာတိမြေနှင့် မတူ။ ဆောင်းလည်း ဆောင်းမို့လို့၊ နွေ လည်းနွေမို့လို့၊ မိုးလည်း မိုးမို့လို့ သတိရစရာတွေက ထွေပြားလှပါဘိ။
ဟိုတုန်းက ဆောင်းမနက် ချမ်းစီးစီး မြူတွေဆိုင်းနေသည့် အချိန်မှာ မှောင်မှောင်မည်း မည်းနှင့် ပထမဆုံးလုပ်သည့် အလုပ်က ခြံထဲတွင် မီးပုံတစ်ပုံဖိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းစောင် ကိုယ်စီပတ်လျက် မီးပုံပတ်ပတ်လည် ၀ိုင်းထိုင်ကြသည်။ မနေ့ကကျန်သော ထမင်းကြမ်းခဲကို မီးပုံထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ ခဏနေလျှင် မီးပုံထဲမှ ထမင်းကြမ်းခဲကို ပြန်ဆယ်သည်။ တစ်ယောက်တစ်ဖဲ့ ယူစားကြသည်။ မည်သည့် ဟိုတယ်စားတော်ဆက်များကမှ ဖန်တီးမပေး နိုင်သည့် အရသာတစ်ခု မီးဖုတ် ထမင်းကြမ်းခဲမှာရှိသည်။ ပြာမျှင်များကပ်လျက် မီးမြိုက်နံ့သင်း နေသော ထမင်းကြမ်းခဲကို ကျွန်တော် ယနေ့ထက်တိုင် လွမ်းဆဲပင်။ နေထွက်ပြူလာသည့် အချိန်ကျတော့ မီးပုံကို ငြိမ်းပစ်လိုက်သည်။
နွေကာလရောက်လျှင် အထူးသတိရမိသည်ကတော့ ရိုးရာသင်္ကြန်ပင်။ မိန်းကလေး များက မဏ္ဍပ်အတွင်းရှိ လှေလောင်း၏ တစ်ဘက်တွင်ရပ်ကြ၍ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျားလေး များက လှေလောင်း၏ အခြားတစ်ဘက် မဏ္ဍပ်အပြင်ဘက်တွင် ရပ်ကာ စကားစမြည် ပြောဆို ရင်း ရေလောင့်ခဲ့ကြသည်များကို မည်သည့်အခါမျှမေ့နိုင်မည်မထင်။ ကျွန်တော်၏သူငယ်ချင်း ငယ်ချစ်မိန်းကလေးအား သင်္ကြန်ရေလောင်းရင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်များကို အမှတ်ထင်ထင်ရှိဆဲ။ အခု သူကတော့ အချိန်အခါမလင့်အောင် လူကြီးမိဘ စီစဉ်ရာဖြင့် အိမ်ထောင်ရက်သားကျ သွားပေပြီ။ ကျွန်တော်ကား မြို့ပြတွင် တစ်စုံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း မိမိ၏ ငယ်ဂုဏ်ကို စတေးနေဆဲ။
ဇာတိမြို့နှင့် ငါးနှစ်တာမျှကင်းကွာပြီးနောက် အိမ်ကို အလည်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက် သည်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ လေဆိပ်နှင့် သိပ်မဝေးလှသဖြင့် ကားမငှားတော့ပဲ ဆိုက်ကား နှင့်ပဲ သွားတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ဆိုက်ကားတစ်စီးငှားသည်။ သွားရမည့်နေရာကို ပြောလိုက်သည်နှင့် မိမိတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသော ဆိုက်ကားသမားက “ခင်ဗျားတို့အိမ်ကို ကျွန်တော်သိတယ်။ ခင်ဗျား ဆရာမသား ဟုတ်တယ်မလား” ဟုဆိုသည်။ ဤစကားမျှဖြင့်ပင် မိမိကို အသိအမှတ်ပြုကြသော အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ နွေးထွေးမှုကို စတင်ခံစားရသည်။ အိမ်ရှေ့ ရောက်သောအခါ ဆိုက်ကားပေါ်မှဆင်း၍ အထုပ်အပိုးများကို ချစဉ် ဇဝေဇ၀ါဖြင့် အိမ်အပေါ်ထပ်မှ ငေးကြည့်နေကြသော ညီငယ်၊ ညီမငယ်များက “ဟေး . . . ကိုကို ပြန်လာပြီ” ဟုအော်ကာ ပြေးဆင်းလာကြသည်။ ဖက်ရမ်းကြသည်။ အထုပ်အပိုးများကို ဆွဲငင်ကာ အပေါ်ထပ်ကို တက်ကြသည်။ “သားကြီးက ဆံပင်တွေအရှည်ကြီးနဲ့ ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ထားတော့ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့ တူတယ်” ဟု အမေက မျက်ရည်စမ်းစမ်းဖြင့် ပြုံးလျက် ဆိုသည်။ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်မှန်း သိလျက်ပင် ကျွန်တော် ၀မ်းသာမိသည်။
အမေ့သားလေးကို တော်လို့ တတ်လို့ အမေက ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အမေ့သားလေး ကို အမေ့သားလေးမို့လို့ကို ချစ်တာ ဟူသောစကားကို သတိရသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သားသမီးများကို အမြဲတမ်း မျက်နှာတင်းတင်းဖြင့် ဆုံးမဆက်ဆံလေ့ရှိသော အဖေသည် တပြုံးပြုံးဖြင့် သဘောကျနေသည်။ ထူထူထဲထဲ မဟုတ်ပဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ရှည်ရှည် မျောမျောဖြစ်နေသော ကျွန်တော်၏ နှုတ်ခမ်းမွေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးများကို ကြည့်၍ ညီမငယ်က “ကိုကို့ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေက ကြံခင်းကို ဆင်နင်းထားတာနဲ့တူတယ်” ဟု ပမာခိုင်းသဖြင့် ၀ိုင်း ရယ်ကြသည်။
သာယာသော ညနေခင်းတွင် စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် လျှောက်လည်သောအခါ ဇာတိမြို့သည် ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်သိသော ဇာတိမြို့နှင့် မတူတော့မှန်း တဖြည်းဖြည်း သိလာရသည်။
ဇာတိမြို့သည် အနည်းငယ် စိမ်းကားစပြုလေပြီ။ ကျွန်တော့ရင်ထဲတွင် အမြဲတမ်း ရှိသော မွေးရပ်မြေကား အတိတ်တွင်ကျန်ခဲ့လေပြီ။ မြို့သည် ပြောင်းလဲကြီးပြင်းစပြု ပြီ။ သို့သော် ကျွန်တော်ချစ်သော ဇာတိမြို့၏ အရိပ်အယောင် အငွေ့အသက် တော်တော် များများ ကို မြင်ရသေးသည်။
အိမ်တွင် စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် နေထိုင်သည်မှာ တစ်လပဲရှိသေးသည်။ အိမ်နီးနားချင်း တို့က ငါ့တူ မင်း ရန်ကုန်ကို မပြန်သေးဘူးလားဟု မေးကြသဖြင့် ပြုံးမိသည်။ သူတို့ သုံးသည့် အသုံးအနှုန်း “ပြန်သည်” ဆိုသည့် သဘောက ကျွန်တော်သည် ဤနေရာတွင် အတည်တကျ နေထိုင်သူမဟုတ်၊ တစိမ်းဧည့်သည်သာဖြစ်သည် ဆိုသော သဘောကိုဆောင်နေသလားလို့ တွေးမိသည်။ သည်လိုနှင့် ခွင့်ရက်စေ့ပြီး ခွဲခွာရမည့် အချိန်ကို ရောက်လာသည်။
ရေပိုကြည်ရာ မြက်ပိုစိမ်းရာကို ရှာဖွေရွေ့လျားရင်း “မိမိအိမ်သည်သာ မွေ့လျော်ရာ” ဟူသော စကားကို ပိုမိုသဘောပေါက်တတ်ခဲ့ပြီ။ အိမ်၊ အိမ်၏၀န်းကျင်ရနံ့၊ လုံခြုံမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ချစ်စရာမိခင်ဘာသာစကား (ရခိုင်ဘာသာစကား)၊ မိခင်ဖခင် (အခုတော့ မိအို ဖအို)၊ အားရပါးရ စားခဲ့ရသည့် ရိုးရာ စားမြိန်များ။ ဤအရာ . . . ဤများ၏ အလယ်ကို ချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်မည်ဆိုလျှင် မည်မျှကောင်းမည်နည်း။ တစ်ခါတလေတော့ ဘ၀အမောကို အသောကလေးနှင့် ဖြေရသည်။ တစ်ခါတလေတော့ ဘ၀အမောတစ်ဖက်နှင့် ရက်ဆက်လွမ်းရသည်။ ဤအလွမ်းအမောတို့ကား မိမိနေ့စဉ်ဘ၀၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်နေပေပြီ။
(စစ်တွေဇာတိ စာရေးဆရာ ကျော်ဇောဦး ဟာ ဒီဆောင်းပါးလေးကို Lifestyle မဂဇင်းမှာ လက်ထောက် အယ်ဒီတာအဖြစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခု (—) လထုတ် lifestyle မဂဇင်းရဲ့ cover story အချီးပိုင်း အဖြစ် ဒီဆောင်းပါးတို ကို ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ ကျော်ဇောဦးရဲ့ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။)
ကြှနျတျောက တောသား။ ကမျးရိုးတနျးသား။
ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျတုနျးက ကြှနျတျောတို့ဇာတိမွို့မှ ရနျကုနျသို့ သှားရနျလာရနျ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးခကျခဲသညျ။ ကြှနျတေျာ့ ဦးလေးတှေ တက်ကသိုလျသှားတကျလြှငျ လယောဉျဖွငျ့သာ သှားကွပွနျကွသညျ။ သူတို့လဆေိပျကို ဆငျးလြှငျ အဖကေ ကြှနျတေျာ့ကို ချေါသှားမွဲ။ လယောဉျသညျ ပွေးလမျးတှငျ ပထမပွေးသညျ။ ပွီးတော့ လထေဲသို့ တဖွညျးဖွညျး ကွှတကျကာ အရှတေ့ောငျအရပျသို့ ပြံသနျးသှားသညျ။ ကောငျးကငျထဲတှငျ လယောဉျ တဖွညျးဖွညျး မှေးမှိနျပြောကျကှယျသှားသညျ။
ကလေးဘဝတုနျးက ကြှနျတေျာ့စိတျထငျ ရနျကုနျဆိုသညျ့နရောကား ကောငျးကငျတှငျ ရှိသညျ။ လယောဉျဖွငျ့သှားလြှငျရောကျသညျ။ ကောငျးကငျတှငျရှိသညျမှနျလြှငျ အမတေို့ ပွော သညျ့ နတျပွညျဆိုတာ ရနျကုနျပဲဖွဈမညျဟုထငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျတျောကွီးလြှငျ ရနျကုနျ သှားမညျ။ ဒါက ကလေးဘဝအတှေး။ ဒါကို ပွနျစဉျးစားမိတိုငျး မိမိကိုယျမိမိ ပွုံးမိသညျ။ သညျလိုနှငျ့ ကြှနျတျောရနျကုနျရောကျလာသညျ။ သို့သျော နဖူးတှေ့ ဒူးတှကွေုံ့ရသညျ့ ရနျကုနျကား ကြှနျတေျာ့အတှကျ နတျပွညျမဟုတျ။ တဈရကျစံလိုကျ ဆယျရကျခံလိုကျ စံစား လိုကျ ခံစားလိုကျဖွငျ့ မွို့ပွကို ဖကျတှယျနထေိုငျမိသညျမှာ ဆယျစုနှဈတဈခုပငျ ရှိရော့မညျ။
စမျးသပျခနျးထဲက ကွှကျကလေးလို tread-mill ရဟတျလှောငျအိမျလေးထဲတှငျ ရှကေို့ ပွေးနရေငျး ပွေးနရေငျး ခရီးမတှငျမှနျးမသိ၊ အပတျရပေေါငျးမညျမြှ လညျသှားမှနျး လညျးမသိ၊ ဇာတိသိစိတျအရ တုံ့ပွနျရငျးသာ ရှကေို့ပွေးနမေိတော့သညျ။
အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝ ကြှနျတျောဆိုးသှမျးလို့ ကောငျးတုနျး မိုကျမဲခွငျးကို ဂုဏျယူလို့ကောငျးတုနျးက အမေ ကြှနျတေျာ့ကို ငိုယိုဆုံးမလြှငျ “ဘဝအမော” ဆိုတာ အမစေ့ကားတှထေဲမှာ ပါလာတတျသညျ။ ဟိုတုနျးကတော့ အမကေ မွနျမာစာဆရာမမို့လို့ ခြဲ့ထှငျပွောသညျဟု ထငျမိသညျ။ ဘဝအမော ဆိုတာကို ကိုယျတိုငျ ဘဝမှာမောလာတော့မှ နားလညျမိသညျ။
တှေးကွညျ့လြှငျ အရာရာတိုငျးမှာ လှမျးစရာခညျြးပငျ။ အရာရာတိုငျးသညျ ဇာတိမွနှေငျ့ မတူ။ ဆောငျးလညျး ဆောငျးမို့လို့၊ နှေ လညျးနှမေို့လို့၊ မိုးလညျး မိုးမို့လို့ သတိရစရာတှကေ ထှပွေားလှပါဘိ။
ဟိုတုနျးက ဆောငျးမနကျ ခမျြးစီးစီး မွူတှဆေိုငျးနသေညျ့ အခြိနျမှာ မှောငျမှောငျမညျး မညျးနှငျ့ ပထမဆုံးလုပျသညျ့ အလုပျက ခွံထဲတှငျ မီးပုံတဈပုံဖိုခွငျးပငျဖွဈသညျ။ လူတိုငျးစောငျ ကိုယျစီပတျလကျြ မီးပုံပတျပတျလညျ ၀ိုငျးထိုငျကွသညျ။ မနကေ့ကနျြသော ထမငျးကွမျးခဲကို မီးပုံထဲ ပဈထညျ့လိုကျသညျ။ ခဏနလြှေငျ မီးပုံထဲမှ ထမငျးကွမျးခဲကို ပွနျဆယျသညျ။ တဈယောကျတဈဖဲ့ ယူစားကွသညျ။ မညျသညျ့ ဟိုတယျစားတျောဆကျမြားကမှ ဖနျတီးမပေး နိုငျသညျ့ အရသာတဈခု မီးဖုတျ ထမငျးကွမျးခဲမှာရှိသညျ။ ပွာမြှငျမြားကပျလကျြ မီးမွိုကျနံ့သငျး နသေော ထမငျးကွမျးခဲကို ကြှနျတျော ယနထေ့ကျတိုငျ လှမျးဆဲပငျ။ နထှေကျပွူလာသညျ့ အခြိနျကတြော့ မီးပုံကို ငွိမျးပဈလိုကျသညျ။
နှကောလရောကျလြှငျ အထူးသတိရမိသညျကတော့ ရိုးရာသင်ျကွနျပငျ။ မိနျးကလေး မြားက မဏ်ဍပျအတှငျးရှိ လှလေောငျး၏ တဈဘကျတှငျရပျကွ၍ ကြှနျတျောတို့ ယောကငြ်ျားလေး မြားက လှလေောငျး၏ အခွားတဈဘကျ မဏ်ဍပျအပွငျဘကျတှငျ ရပျကာ စကားစမွညျ ပွောဆို ရငျး ရလေောငျ့ခဲ့ကွသညျမြားကို မညျသညျ့အခါမြှမနေို့ငျမညျမထငျ။ ကြှနျတျော၏သူငယျခငျြး ငယျခဈြမိနျးကလေးအား သင်ျကွနျရလေောငျးရငျး ဖှငျ့ဟခဲ့သညျမြားကို အမှတျထငျထငျရှိဆဲ။ အခု သူကတော့ အခြိနျအခါမလငျ့အောငျ လူကွီးမိဘ စီစဉျရာဖွငျ့ အိမျထောငျရကျသားကြ သှားပပွေီ။ ကြှနျတျောကား မွို့ပွတှငျ တဈစုံတဈခုကို တညျဆောကျဖို့ ကွိုးစားရငျး မိမိ၏ ငယျဂုဏျကို စတေးနဆေဲ။
*                                  *                                     *
ဇာတိမွို့နှငျ့ ငါးနှဈတာမြှကငျးကှာပွီးနောကျ အိမျကို အလညျတဈခေါကျပွနျရောကျ သညျ။ ကြှနျတျောတို့အိမျမှာ လဆေိပျနှငျ့ သိပျမဝေးလှသဖွငျ့ ကားမငှားတော့ပဲ ဆိုကျကား နှငျ့ပဲ သှားတော့မညျဟု ဆုံးဖွတျကာ ဆိုကျကားတဈစီးငှားသညျ။ သှားရမညျ့နရောကို ပွောလိုကျသညျနှငျ့ မိမိတဈခါမှ မမွငျဖူးသော ဆိုကျကားသမားက “ခငျဗြားတို့အိမျကို ကြှနျတျောသိတယျ။ ခငျဗြား ဆရာမသား ဟုတျတယျမလား” ဟုဆိုသညျ။ ဤစကားမြှဖွငျ့ပငျ မိမိကို အသိအမှတျပွုကွသော အသိုငျးအဝိုငျး၏ နှေးထှေးမှုကို စတငျခံစားရသညျ။ အိမျရှေ့ ရောကျသောအခါ ဆိုကျကားပျေါမှဆငျး၍ အထုပျအပိုးမြားကို ခစြဉျ ဇဝဇေဝါဖွငျ့ အိမျအပျေါထပျမှ ငေးကွညျ့နကွေသော ညီငယျ၊ ညီမငယျမြားက “ဟေး . . . ကိုကို ပွနျလာပွီ” ဟုအျောကာ ပွေးဆငျးလာကွသညျ။ ဖကျရမျးကွသညျ။ အထုပျအပိုးမြားကို ဆှဲငငျကာ အပျေါထပျကို တကျကွသညျ။ “သားကွီးက ဆံပငျတှအေရှညျကွီးနဲ့ ဘောငျးဘီရှညျ ဝတျထားတော့ နိုငျငံခွားရုပျရှငျမငျးသားနဲ့ တူတယျ” ဟု အမကေ မကျြရညျစမျးစမျးဖွငျ့ ပွုံးလကျြ ဆိုသညျ။ ဘယျလိုမှ မတူနိုငျမှနျး သိလကျြပငျ ကြှနျတျော ဝမျးသာမိသညျ။
အမသေ့ားလေးကို တျောလို့ တတျလို့ အမကေ ခဈြတာ မဟုတျဘူး၊ အမသေ့ားလေး ကို အမသေ့ားလေးမို့လို့ကို ခဈြတာ ဟူသောစကားကို သတိရသညျ။ ငယျစဉျကတညျးက သားသမီးမြားကို အမွဲတမျး မကျြနှာတငျးတငျးဖွငျ့ ဆုံးမဆကျဆံလရှေိ့သော အဖသေညျ တပွုံးပွုံးဖွငျ့ သဘောကနြသေညျ။ ထူထူထဲထဲ မဟုတျပဲ ထိုးထိုးထောငျထောငျ ရှညျရှညျ မြောမြောဖွဈနသေော ကြှနျတျော၏ နှုတျခမျးမှေး၊ မုတျဆိတျမှေးမြားကို ကွညျ့၍ ညီမငယျက “ကိုကို့ နှုတျခမျးမှေးတှကေ ကွံခငျးကို ဆငျနငျးထားတာနဲ့တူတယျ” ဟု ပမာခိုငျးသဖွငျ့ ၀ိုငျး ရယျကွသညျ။
သာယာသော ညနခေငျးတှငျ စကျဘီးတဈစီးဖွငျ့ လြှောကျလညျသောအခါ ဇာတိမွို့သညျ ငယျငယျက ကြှနျတျောသိသော ဇာတိမွို့နှငျ့ မတူတော့မှနျး တဖွညျးဖွညျး သိလာရသညျ။
ဇာတိမွို့သညျ အနညျးငယျ စိမျးကားစပွုလပွေီ။ ကြှနျတော့ရငျထဲတှငျ အမွဲတမျး ရှိသော မှေးရပျမွကေား အတိတျတှငျကနျြခဲ့လပွေီ။ မွို့သညျ ပွောငျးလဲကွီးပွငျးစပွု ပွီ။ သို့သျော ကြှနျတျောခဈြသော ဇာတိမွို့၏ အရိပျအယောငျ အငှအေ့သကျ တျောတျော မြားမြား ကို မွငျရသေးသညျ။
အိမျတှငျ စိတျခမျြးသာစှာဖွငျ့ နထေိုငျသညျမှာ တဈလပဲရှိသေးသညျ။ အိမျနီးနားခငျြး တို့က ငါ့တူ မငျး ရနျကုနျကို မပွနျသေးဘူးလားဟု မေးကွသဖွငျ့ ပွုံးမိသညျ။ သူတို့ သုံးသညျ့ အသုံးအနှုနျး “ပွနျသညျ” ဆိုသညျ့ သဘောက ကြှနျတျောသညျ ဤနရောတှငျ အတညျတကြ နထေိုငျသူမဟုတျ၊ တစိမျးဧညျ့သညျသာဖွဈသညျ ဆိုသော သဘောကိုဆောငျနသေလားလို့ တှေးမိသညျ။ သညျလိုနှငျ့ ခှငျ့ရကျစပွေီ့း ခှဲခှာရမညျ့ အခြိနျကို ရောကျလာသညျ။
*                           *                           *
ရပေိုကွညျရာ မွကျပိုစိမျးရာကို ရှာဖှရှေလြေ့ားရငျး “မိမိအိမျသညျသာ မှလြေ့ျောရာ” ဟူသော စကားကို ပိုမိုသဘောပေါကျတတျခဲ့ပွီ။ အိမျ၊ အိမျ၏ဝနျးကငျြရနံ့၊ လုံခွုံမှု၊ သကျတောငျ့သကျသာရှိမှု၊ ခဈြစရာမိခငျဘာသာစကား (ရခိုငျဘာသာစကား)၊ မိခငျဖခငျ (အခုတော့ မိအို ဖအို)၊ အားရပါးရ စားခဲ့ရသညျ့ ရိုးရာ စားမွိနျမြား။ ဤအရာ . . . ဤမြား၏ အလယျကို ခကျြခငျြးရောကျသှားနိုငျမညျဆိုလြှငျ မညျမြှကောငျးမညျနညျး။ တဈခါတလတေော့ ဘဝအမောကို အသောကလေးနှငျ့ ဖွရေသညျ။ တဈခါတလတေော့ ဘဝအမောတဈဖကျနှငျ့ ရကျဆကျလှမျးရသညျ။ ဤအလှမျးအမောတို့ကား မိမိနစေ့ဉျဘဝ၏ အစိတျအပိုငျးတဈရပျ ဖွဈနပေပွေီ။
(စဈတှဇောတိ စာရေးဆရာ ကြျောဇောဦး ဟာ ဒီဆောငျးပါးလေးကို Lifestyle မဂဇငျးမှာ လကျထောကျ အယျဒီတာအဖွဈ ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာ အလုပျလုပျနစေဉျ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၉ ခု (—) လထုတျ lifestyle မဂဇငျးရဲ့ cover story အခြီးပိုငျး အဖွဈ ဒီဆောငျးပါးတို ကို ပုံနှိပျဖျေါပွခဲ့တယျ။ ကြျောဇောဦးရဲ့ ပထမဆုံး ပုံနှိပျဖျေါပွခွငျးခံရတဲ့ လကျရာဖွဈပါတယျ။)
post number – 1
short url to this post => https://bit.ly/3CUNtEl
Next ဒီကနေ့ ကြှနျတျောရောကျနတေဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျ